SomaliTalk.com » 2010 » May » 02
Home » Archive Maalinta May 2nd, 2010
Warbixin iyo Waraysi: Urur Ujeedadiisu Tahay Dhameynta Colaadaha Wadamada Geeska Afrika
oo Maalintii Seddaxaad Ku Shiraya Xarunta Urur Goboleedka IGAD ee Caasimada Dalka Jabuuti, Wareysi Aynu Idiinkaga Hayno Xubin Ka Tirsan Ururkaas Urur Ay Ku Mideysan Yihiin Xubno Ka Kala Socda Dalallka Geeska Afrika oo Ujeedadiisu Tahay Dhameynta Colaadaha Geeska Afrika, Ka Shaqeynta Is-dhex gelka Bulshada Todobada Wadan iyo Kor u Qaadida Dhaqaalaha Wadamada Geeska Afrika oo Lagu Aas aasey Novembar...
Wirwirka dhalanteedka aan Librannin, ee u-hanqal- taag-ga awoodda ee Soomaalida | Dr. Shariif Saalax
[waa fikrado fudfudud oo loo gudbinayo qof kasta oo daneeya] 1.Balambalka iyo hoogga asiibay Soomaalida Arrintan kor ku xussan hore ayaa siyaalo badan loo qaadaa-dhigay, waana la wada ogyahay, oo labaatan iyo dhowrkii sano la soo dhaafay ayaa nalku ku daarnaa. Soomaali iyo shisheeyeba way ka hadleen, qoreen, sawireen oo ka doodeen, doc walbana ka falanqeeyeen, dawankeeda khatarta ahina yeeriyeen....
naadiga pv10 oo ku guulaystay puntland premier league ee malaysia
Ciyaarihii naadiyada Puntland ppl ee ka socday caasimada malaysia ee kuala lumpur ayaa soo dhamaaday galabta 01 may 2010 iyadoo ay wada ciyaarayeen kooxaha baangii& pv10 oo ahaa kuwa awood ba’an soo sheegtay mudadii ay ciyaartu socotay. Halkan ka daawo sawiro dheeraad ah xulalka labadan naadi ee pv10 iyo baangii ayaa ahaa kuwo ciyaaraha ka reebay naadiyo badan taasoo u saamaxday...
Ururka Waddaniga Soomaaliyeed oo Cambaareynaya Qaraxyada Masjidyada
Haddii aan nahay Bahda Ururka Waddaniga Soomaaliyeed waxaan halkaan ka soo jeedinaynaa baaq Cambaareyn ah oo ku saabsan Qaraxyada lala beeganayo Masjidyada. Waxaa qaraxyo lagu weeraray masjidyo ku yaalla magaalada Muqdisho iyo Kismaayo. Waxaana ku halaagsamay Ummad Soomaaliyeed oo Cibaadeysanaysa. Waxaan Allah SWT ka beryeynaa dadkii ku geeriyooday Qaraxyadaas inuu Naxariistiisa Janno ka waraabiyo,...
Halkudheg: masjid, Shaamow
Bayaan ku aaddan xasuuqii ka dhacay masjidka Bakaaraha
Qoraal ay soo saareen culimo Soomaaliyeed ayaa cambaareeyay xasuuqii ka dhacay masjidka Bakaaraha ee magaalada Muqdisho. Bayaankaas ayaa u qornaa sida hoos ku qoran: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه 1. waxaan cambaaraynaynaa xasuuqii ka dhacay masjidka Bakaaraha ee magaalada Muqdisho,...